ဗမာပြည်ကထကြွသောင်းကျန်းနေသောဗုဒ္ဓ ဘာ သာ ၀င် များ ၏ ပုံ ရိပ် (ဘာသာပြန်-စဆုံး) | Burma Muslim
ဗမာပြည်ကထကြွသောင်းကျန်းနေသောဗုဒ္ဓ ဘာ သာ ၀င် များ ၏ ပုံ ရိပ် (ဘာသာပြန်-စဆုံး)
By burmamuslim on March 14, 2014
(The Independent မဂ္ဂဇင်းမှ Kevin McKiernan ၏ Buddhist Rampage in BurmaးBurma’s Brutal Buddhists ဆောင်းပါး မြန်မာ ဘာသာပြန်စဆုံး)
ကျွန်ုပ် မြန်မာပြည်သို့ရောက်ပြီး ရက်သတ္တအပတ် အနည်းငယ်အကြာ ပြီးခဲ့သည့်လအတွင်း နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပြည်သူ့စစ်တို့သည် အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးငယ် အများစုပါဝင်သော ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စ်လင်မ် အနည်းဆုံး ၄၈ ဦးအား စုပြုံသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်ဟု လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သတင်းများ၌ တင်ပြကြသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်မှာ စာနယ်ဇင်းသမားနှင့် လူမှုစာနာ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားများကို အကြီးအကျယ် ကန့်သတ်ထားရာ မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း၌ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများက ဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်သည် ပြဿနာ အစပြုဒေသဖြစ်သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူရမ်းကားအုပ်စုတို့သည် မွတ်စ်လင်မ် ၂၀၀ ဦးထက်မနည်း သတ်ဖြတ်လိုက်ကြပြီး ထောင်နှင့်ချီသော အိမ်ခြေများကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြသည်။ အစိုးရပိုင်းမှ ထိန်းချုပ်ကိုင်တွယ်ရမည့်အစား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့၏ အားဖြည့်ပါဝင်နေခြင်းက ရိုဟင်ဂျာပေါင်း တစ်သိန်းကျော်ကို စစ်တပ်ထိန်းချုပ်သည့် စခန်းများသို့ ရောက်သွားအောင် တွန်းပို့ခဲ့သည်ဟု စာနယ်ဇင်းသမားတို့၏ သတင်းများတွင် တွေ့ရသည်။ ၎င်းတို့မှာ ထိုနေရာများ၌ ယနေ့တိုင်အောင် ရှိနေကြ၏။
သူတို့သည် အာဏာပိုင်တို့၏ ခွင့်ပြုချက်မရလျှင် ထိမ်းမြားခွင့် မရှိ၊ ရင်သွေးနှစ်ဦးထက် ပိုယူခွင့် မရှိကြ။ ထို့အတူ ရဲနှင့်စစ်တပ်၏ စစ်ဆေးရေးဂိတ်များကို ကျော်လွန်ပြီး သွားလာခွင့် မရကြချေ။ စုပြုံသတ်ဖြတ်မှု၏နောက် ၎င်းအပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ကုလသမဂ္ဂမှ မြန်မာနိုင်ငံအား အဆောတလျင် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ယခင်အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်များ အတိုင်း သတ်ဖြတ်ခြင်းများအတွက် တာဝန်ခံရန် အစိုးရဖက်မှ ငြင်းဆိုကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၊ စစ်တွေမြို့အနီးရှိ လူကြပ်သိပ်နေသော နေရပ်စွန့်ခွာပြည်တွင်းဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခု၏ပုံ။ ရိုဟင်ဂျာများမှာ အာဏာပိုင်တို့၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ပြည်တွင်း ခရီးသွားလာခွင့်၊ နှစ်ဦးထက်ပို၍ ရင်သွေးရယူခွင့် မရှိချေ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဆိုသော စကားလုံးအား အကြမ်းဖက်မှု၌ အထူးပြုနာမ်စားတစ်ရပ်အဖြစ် အသုံးချလာ လိမ့်မည်ဟူသည်ကို ကျွန်ုပ်သည် ဘယ်သော အခါမျှ မထင်မှတ်ခဲ့ဖူးပါ။
ယမန်နှစ်နွေရာသီတွင်တော့ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း၏ မျက်နှာဖုံးပေါ်ဝယ် “THE FACE OF BUDDHIST TERROR” ခေါင်းစီးစာတန်းဖြင့် နီညိုရောင် သင်္ကန်းဝတ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ဦး၏ ပုံရိပ်မြင်ကွင်းကို တွေ့ရသောအခါ အရာ အားလုံးပြောင်းလဲသွားပါသည်။ ရုန့်ရင်းကြမ်းကြုတ်သော နှစ် ၅၀ ကြာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး အဆုံးသတ်ခြင်း နှင့် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သမ္မတ ဘားရက် အိုဘားမားက သမိုင်းဝင် ခရီးစဉ်အဖြစ် ရောက်လာခဲ့ပြီး များမကြာမီ ၎င်းမျက်နှာဖုံးဆောင်းပါး ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပကတိ အနေအထားတွင်မူ နိုင်ငံတွင်း လူမျိုးရေးခွဲခြား အကြမ်းဖက်မှု ကြီးထွားနေခြင်းက ကူးပြောင်းရေးအခင်းအကျင်းကို တားဆီးလျက်ရှိ၏။ အာရှတိုက်၏ နောက်ဆုံးသော နယ်ခြားဈေးကွက်နိုင်ငံထဲတွင် အနောက်တိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းတို့၏ ပုံစံတူဖြစ်တည်စေလိုသော အာသာဆန္ဒအား အရှိန်လျော့ကျစေတော့မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူဦးရေ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်၊ မွတ်စ်လင်မ်များမှာ ၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိနေကြသည်ဟု ဆိုသည်။ တိုင်းရင်းသားအုပ်စုကွဲ အနည်းဆုံး ၁၃၅ မျိုးရှိပြီး၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာပဋိပက္ခများလည်း ရှည်လျားသည့်ရာဇ၀င်နှင့်တစ်ကွ ရှိနေသည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံ တစ်ခုအဖြစ် တည်ထောင်သော်လည်း ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခြင်းကိုခံရပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်တိုင်အောင် အာဏာရှင် စံနစ်အောက်၌ တည်ရှိနေခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် စစ်အစိုးရသည် တင်းမာမှုလမ်းကြောင်းမှခွဲထွက်လာပြီး
နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် အတူ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ ခွင့်ပြုမည်၊ တရားဝင် အရပ်သားအစိုးရ လမ်းကြောင်းသို့ ဦးတည်မည်ဟု ကြေငြာသည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ အနက် မိမိ၏နေအိမ်၌ ၁၅ နှစ်မျှ အကျယ်ချုပ်ခံရသော ထင်ရှားသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နာမည်ကြီး အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်မှ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများကို လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးခြင်းလည်း ပါဝင်သည်။ စစ်တပ် ထိန်းချုပ်မှုဖြေလျှော့လိုက်ခြင်းက နိုင်ငံတကာ ပိတ်ဆို့မှုများကို တမဟုတ်ချင်း ရုပ်သိမ်းစေလိုက်သည်။ သို့သော် နောက်ဆက်တွဲအားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နှင့် မွတ်စ်လင်မ်တို့ အကြား အဓိပ္ပာယ်မဲ့ လူမျိုးခွဲခြားအကြမ်းဖက်မှု တစ်ရပ်ရုတ်ခြည်းထွက်ပေါ်လာ၏။
ယမန်နှစ်က ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိသော ဗမာပြည်၌ ရွှေရောင်စေတီဘုရားများ၊ ရှေးဟောင်းကျောင်းဂန်များ ထောင်နှင့်ချီပြီး ရှိနေ၏။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် စစ်အစိုးရမှ မြန်မာဟု အမည်ပြောင်းလဲသော်လည်း အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများစွာကမူ ဗမာ – Burma ဟု ခေါ်ဆိုနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် တရုတ်နှင့်ဗီယက်နမ်မှ သတင်းများရေးသားပေးပို့နေသော်လည်း မြန်မာပြည်သည် အရှေ့တောင်အာရှ ကုန်းတွင်းပိုင်းရှိ တက္ကဆက်ကဲ့သို့ မြေလွတ်မြေရိုင်းကြွယ်ဝသည့်နိုင်ငံ တစ်ခုဖြစ်မှန်း မသိခဲ့ရပါ။
သမ္မတ အိုဘားမားအတွက် ဤနိုင်ငံအား မိတ်သဟာယသစ်ဖွဲ့ရန် အဘယ်အကြောင်းက တွန်းအားပေးသနည်း၊ ကျွန်ုပ်၏အမိမြေအတွက် နိုင်ငံရေးအရ မည်သည့်အကျိုးရှိနိုင်မည်နည်းဟူသည်ကို ကျွန်ုပ် နားမလည်ခဲ့သည်မှာ အမှန်ပင်။ အိုဘားမား၏အထက်ဆက်သမ္မတတို့သည် တရားသည်ဖြစ်စေ မတရားသည်ဖြစ်စေ အာဖဂန်နစ္စတန် နှင့် အီရတ်၌ အရှုံးပေါ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အရောင်ကပ်ခံရပြီးလေပြီ။ အိုဘားမားသည် နိုင်ငံရေးမူဝါဒမျက်နှာစာ၌ အသာစီးရရေးလိုအပ်ချက်အရ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ် ထင်မြင်ခဲ့မိသဖြင့် စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါသည်။
အလည်အပတ်ခရီးစဉ်ပြီးနောက် သမ္မတအိုဘားမားသည် စီးပွားရေးဒဏ်ခံပိတ်ဆို့မှုများကို ဖယ်ရှားပေးခဲ့သည်။ ယင်းဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုများက မြန်မာပြည်အား ဆယ်စုနှ စ်များစွာ စောင့်ကြည့်နယ်မြေအဖြစ် အထီးကျန်စေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဤအဖြစ်အပျက်များသည် ကံဆိုးလှစွာသော ရိုဟင်ဂျာတို့အပေါ် အဘယ်ကဲ့သို့ သြဇာသက်ရောက်ရိုက်ခတ်စေသနည်း ဟူသည်ကို ကျွန်ုပ် အံအားတသင့် ဖြစ်ရပေသည်။ ထိုသူတို့အား “ကမ္ဘာ့အညှင်းပန်းခံရဆုံး လူနည်းစုဝင်များ ” အဖြစ် ကုလသမဂ္ဂမှ ခေါ်ဆိုထားသည်။ ထိုသူတို့သည် နည်းပင်နည်းငြား ၎င်းတို့၏ ၀မ်းနည်းဖွယ်ဇာတ်လမ်းကို အိုဘားမား၏အထက်ဆက်အတွင်း၌ အရေးတယူ ပြုခဲ့ပါ၏လော ? သို့တည်းမဟုတ် ရိုဟင်ဂျာတို့သည် အကြီးစားဇာတ်အိမ်တစ်ခုရှိ အရံဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုပေလော ?
မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်များမှ ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံသား ဥပဒေကို ပြန်လည်ရေးသားသည့်အခါ ရိုဟင်ဂျာတို့သည် နိုင်ငံသား အဖြစ်မှ ပယ်ဖျက် ခံလိုက်ရသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းပေါ်ရှိသည့် စိတ်ဝင်စားမှုကို ပစိဖိတ်ဒေသတွင်း တရုတ် လွှမ်းမိုးမှုဖက်သို့ အာရုံလွှဲလိုက်သော အိုဘားမား၏
“အာရှရေးရာပဲ့ကိုင်ခြင်း”နှင့် တွဲစပ်နေသည့် ကစားကွက်တစ်ခုလေလော ?
လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်မှစ၍ လူ့မျိုးနွယ်ရှင်း ထုတ်ရေးကြောင့် မြန်မာပြည်ရှိ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး သိန်းဂဏန်းထိ အတိဒုက္ခရောက်နေကြသည်။
စွတ်စိုထိုင်းမှိုင်းသည့် နံနက်ခင်းတစ်ခုတွင် ကျွန်ုပ် ရန်ကုန်မြေသို့ ခြေချခဲ့ပါသည်။ ဤခရီးစဉ်မတိုင်မီ လူ့အခွင့်အရေး ကျွမ်းကျင်သူများ၏ ဦးဆောင်သူ တစ်ဦးဖြစ်သော ဘီလ် ဒေးဗစ် Bill Davis က ကရင်းမ် အမည်ရှိ ရိုဟင်ဂျာလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးအကြောင်း ပြောပြသည်။ ၎င်း ကရင်းမ်(အမည်လွဲ)သည် ခရီးသွားလာခွင့် ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှု မချမှတ်မှီက ရန်ကုန်သို့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူဖြစ်၏။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း မိတ္ထီလာမြို့၌ အကြမ်းဖက် အုပ်စုမှ ဒါဇင်နှင့်ချီသော မွတ်စ်လင်မ်တို့အား စုပြုံ သတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်တစ်ကွ လူပေါင်း တစ်သောင်း သုံးထောင် အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်သွားခြင်း အကြောင်း၊ မွတ်စ်လင်မ် လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ဦး၏ ရွှေအရောင်းအ၀ယ် အချင်းများမှုမှ ဥပဒေမဲ့ထင်ရာစိုင်း လုပ်ရပ်များ ပေါ်ထွက်လာခြင်း အကြောင်း၊ မြို့နေရာအများအပြားမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ မီးတင်ရှို့မှုခံရကြောင်း၊ ၎င်းတို့ လက်ချက်ဖြင့် သေဆုံးသွားသူများကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်း အကြောင်း၊ ယင်းအမှုများရှေ့မှောက်၌လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရပ်ကြည့်လျက်သာ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ လူစုလူအုပ်များက “ ကုလားတွေကို သတ်ကြ ” ဟု အော်ဟစ်နေကြကြောင်း၊ ကုလားဟူသည်မှာ နိုင်ငံခြားသားတို့ကို လူမျိုးရေးဆိုင်ရာ ချိုးနှိမ်ခေါ်ဆိုသည့်အသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ စင်စစ်အားဖြင့် အကြမ်းဖက်ခံမိသားစုများစွာမှာ ယင်းဒေသအတွင်း မျိုးဆက်အလီလီ နေထိုင်လာသူများသာဖြစ်ကြောင်း၊ သူ၏ အဆိုပါအဆက်အသွယ်က ကျွန်ုပ်အား တစ်စစီဖျက်ဆီးခံရသည့် ဗလီဝတ်ကျောင်းနှင့် စာသင်ကျောင်းမြင်ကွင်းကို ခေါ်ဆောင်ပြသနိုင်ကောင်းမည် ဖြစ်ကြောင်း Davis က ပြောပါသည်။
ကျွန်ုပ်အား လေဆိပ်၌ တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း လမ်းကြောပိတ်ဆို့မှု အခက်အခဲများကြောင့် ကရင်းမ်က လေဆိပ် အငှားယာဉ်ဖြင့် လာရောက်ရန် အကြံပြုခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်ရန်ကုန်ရောက်ရှိပြီး တစ်နာရီမျှကြာသော် ကိုလိုနီခေတ်က Queen’s Park Hotel ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည့် ဟိုတယ်၌ စတည်းချသည်။ များမကြာမီ ကျွန်ုပ် အဆက်အသွယ်ပြုထားသော ကရင်းမ် အမည်ရှိ အသက်သုံးဆယ်ကျော် အမျိုးသား တစ်ဦးသည် သူ့အရွယ်နှင့်တင့်တယ်စွာ ၀တ်စားဆင်ယင်လျက် ဟိုတယ် ခန်းမသို့ ရောက်လာသည်။ ဟိုတယ်နှင့် အလှမ်းမဝေးသောနေရာတွင် မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအစာဖြင့် နံနက်စာ စားသောက်ကြသည်။ ၎င်းနောက် သူသည် ကျွန်ုပ်ကို မိတ္ထီလာသို့ ခေါ်ဆောင် မသွားနိုင်ကြောင်း၊ အန္တရာယ်များကြောင်း၊ ကူညီ လိုလှပါသော်လည်း နောက်ခံ သတင်း အချက်အလက် ကိုသာပေးနိုင်ကြောင်း အနှူးအညွတ်ဆိုပါသည်။ “ ကျွန်တော့်ဆီမှာ သမီးငယ်သုံးဦး ရှိနေပါတယ် ” ဟု တိမ်ဝင်သော အသံနှင့် ပြောရှာသည်။
ယမန်နှစ်ဆောင်းဦးကာလ ကျွန်ုပ်၏ခရီးစဉ်အတွင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ တဆင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်၍ တရုတ်နယ်စပ်သို့ သွယ်တန်းသော မိုင်တစ်ထောင်ကျော် အရှည် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ သယ်ပို့ပိုက်လိုင်း တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် တရုတ်နယ်စပ်မှသည် ရခိုင် ကမ်းမြှောင်ဒေသမြို့များထံသို့ ရထားလမ်း တစ်ခုကိုလည်း ဘေဂျင်းမှ ဆက်လက်ဖောက်လုပ်သည်။ ဤသည်မှာ တရုတ်ထုတ်ကုန်များအတွက် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာသို့ အမြန်ဆုံးရောက်ရှိစေသော လမ်းကြောင်းဖြစ်နေသည်။ Coca-Cola ၊ General Electric နှင့် Ford အပါအ၀င် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ အများအပြားသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ဟု ကြေငြာထားပြီးဖြစ်သည်။ အချို့မှာ ရန်ကုန်၌ အရောင်း ကိုယ်စားလှယ်များ ကိုပင် ခေါ်ယူထားကြသည်။
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးခေတ်လွန် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလှိုင်းလုံးသည် အကြီးစားဈေးကွက် အနေအထားအနက် အပါအ၀င် တစ်ခုဖြစ်သည်သာမက လုပ်ငန်းရှင် များစွာကလည်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် သယံဇာတများအပေါ် မျက်စေ့ကျလျက်ရှိသလို မြေယာ အရောင်းအ၀ယ်ဈေးကွက်သည်လည်း ထိုးတက်လျက် ရှိနေပေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့အရှည်ကြာဆုံး ပြည်တွင်းစစ်ကို ကြုံတွေ့လာကြောင်း၊ အကောင်းဆုံးအဖြေ မထွက်နိုင်သေးကြောင်း ကျွန်ုပ် သိထားပါသည်။ အင်အားကြီးစာရင်းဝင်ဖြစ်နေသော မြန်မာစစ်တပ်သည် တရုတ်နှင့်ထိုင်းနယ်စပ်ရှိ တိုင်းရင်းအုပ်စုများနှင့် နှစ်ပေါင်း ၆၀ မျှ တိုက်ပွဲဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူပုန်ဟုဆိုသော ထိုသူတို့မှာ မွတ်စ်လင်မ်အုပ်စုများ မဟုတ်ကြ။ မြန်မာပိုင်နက်နယ်စပ်ဒေသများမှာ ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ (ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံးကျောက်စိမ်း နှင့် ကမ္ဘာ့ ပတ္တမြား၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအပါအ၀င်) အဖိုးတန်ကျောက်မျက်များ ကြွယ်ဝများပြားသလို မြန်မာစစ်တပ်သည် ယင်း အကျိုးအမြတ်တို့ကို ရရှိခံစားနေကြသည်ကို ကျွန်ုပ်သိရှိပါ၏။ ဘိန်းဖြူကို အမေရိကန်သို့ အဓိကတင်ပို့သည့် မြန်မာ့ရွှေတြိဂံဒေသရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုမှ အစိုးရဖက်ယိမ်း စစ်အုပ်စုများသည် အကျိုး အမြတ်ကြီးစွာဖြစ်ထွန်းကြောင်း ခိုင်မာသောအထောက်အထားများလည်း ရှိနေပေသည်။
ရိုဟင်ဂျာများမှာ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာစကားရှိသော လူနည်းစုဝင် တိုင်းရင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ထိုသူများမှာ ဆော်ဒီအာရေဗျမှ မလေးရှားအထိ နိုင်ငံပေါင်း ၆ ခုထက်မနည်း ပြန့်နှံ့လျက်ရှိသည်။ အများစုဖြစ်သော လူဦးရေ ၁.၂ သန်းကို မြန်မာနိုင်ငံ၌ တွေ့နိုင်သည်။ အဓိကအားဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတွင် ရှိနေကြသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တိုက်ခိုက်မှုများအလွန်တွင် သောင်းနှင့်ချီသော ရိုဟင်ဂျာမွတ်စ်လင်မ်တို့မှာ “မိမိကိုယ်ကို ခုခံကာကွယ်မှု” အတွက် ပိတ်လှောင်ခံထားရသည်။
စစ်တွေမြို့သည် နိုင်ငံ့အခြားဒေသများနှင့် ကုန်းတွင်းပိုင်းတောင်စွယ်တောင်တန်းများဖြင့် ပိုင်းခြားခံထားရ သလို ဖြစ်နေပြီး အလွယ်တကူ လမ်းမပေါက်သော မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်သည် ၁၇၈၄ ခုနှစ်မတိုင်မီ လွတ်လပ်သောတိုင်းပြည်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရွှေရောင်လွှမ်းသော ထိုကာလများတွင် ဥရောပခရီးသွားတို့မှ “အရှေ့တိုင်းက ဗင်းနစ်” ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသော ကမ်းမြှောင်ဒေသတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့တိုင် အချို့ဒေသများဝယ် ရိုဟင်ဂျာတို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များထက် လူဦးရေသာလွန် များပြားနေလင့် ကစား ရခိုင်လူမျိုးတို့ကမူ စပိန်နိုင်ငံရှိ ကိုယ့်ဖက်ကိုယ်ယက်သည့် လူမျိုးများ ကဲ့သို့ မိမိကိုယ်ကို သီးခြား တည်ရှိလာသော ရှေးဟောင်းလူမျိုး အင်အားစုကြီးအဖြစ် ခံယူထားဆဲဖြစ်နေကြ၏။
ကရင်းမ်၏ မွေးရပ်မြေနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်သည့် စစ်တွေမြို့သို့ ကျွန်ုပ်သည် လေယာဉ် ခရီးစဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိသည်။ ၎င်းမှာ လူဦးရေ နှစ်သိန်းရှိ ကျွန်းမြို့လေး တစ်မြို့ဖြစ်ကာ ပတ်လည် ၀ိုင်းရံနေသောမြစ်ချောင်းများက ပင်လယ်အော်တွင်းသို့ စီးဝင်နေကြသည်။ ပထမအင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ်ပွဲ ကာလအတွင်း ၁၈၂၅ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှတို့ ၀င်ရောက်ခြေချသည်။ ထိုစဉ်ကတည်းက မွတ်စ်လင်မ် လူဦးရေ ထူထပ်နေသော်လည်း ယင်းဒေသကို ဗုဒ္ဓ၀ါဒစတင် ထွန်းကာလာရာဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်လျက်ရှိကြသည်။
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားမှု၏ ထင်ရှားသောခေါင်းဆောင်တစ်ဦး နှင့် ရှေးရိုးထေရ၀ါဒ လမ်းစဉ်ကျင့်သုံးသူ မွန်ဘုန်းတော်ကြီး ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသည် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြ၍ ၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှအကျဉ်းထောင်ထဲ၌ ပျံလွန်တော်မူခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်လည်း စစ်အစိုးရကို အာခံ၍ စစ်တွေ သံဃာတော်များမှ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကို ဆင်နွှဲရာမှ နိုင်ငံအနှံ့ ကူးစက်သွားသည်။ သို့သော် ရက်စက်ကြမ်းတမ်းစွာ နှိမ်နှင်းခံခဲ့ရသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးလူမျိုးရေးအကြမ်းဖက်မှု ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပွင့်အံလာသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို မုဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်လိုက်သည် ဆိုသော မွတ်စ်လင်မ် သုံးဦးအား ချက်ခြင်းပင် သေဒဏ် ချမှတ်လိုက်သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ထပ်မံပွင့်ထွက်လာပြီး ဆူပူသောင်းကျန်းသော လူစုများက မွတ်စ်လင်မ်ရပ်ကွက် အောင်မင်္ဂလာအား ရှင်းလင်းကာ အိမ်ခြေအများအပြားကို မီးလောင် တိုက်သွင်းခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဖက်ပေါက်ကွဲ အကြား ရိုဟင်ဂျာမွတ်စ်လင်မ် ၂၄၀ ဦးထက်မနည်း သတ်ဖြတ်ခံရပြီး လူပေါင်း တစ်သိန်းလေးသောင်းခန့်မှာ စစ်တွေမြို့အနီး ဒုက္ခသည် စခန်းများ၌ ပိတ်လှောင်ခံလိုက် ရသည်။ ထောင်နှင့်ချီသော ရိုဟင်ဂျာတို့က နိုင်ငံစွန့် ထွက်ပြေးနိုင်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။
အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်တွင်း ၀င်ကြည့်နိုင်အောင် ကြိုးစားရာ၌ ရဲကင်းတစ်ခုက ကျွန်ုပ်အား လှည့်ပြန်စေခဲ့သည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် ပင်လယ်ပြင်နှင့် မဝေးလွန်းလှသည့် စခန်းတစ်ခုသို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည့် လူတစ်ဦးကို ကျွန်ုပ်မှ ငှားရမ်းသည်။ ထိုနေရာတွင် နူးရ်အလီ အမည်ရှိ အသက် ၃၀ ကျော် ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသား တစ်ဦးနှင့် ဆုံစည်းခဲ့သည်။ သူဝတ်ဆင်ထားသည့် အဖြူရောင်တီရှပ်လေးမှာ ဟောင်းမြင်းစုတ်ချာနေပေပြီ။ အလီသည် ကျွန်ုပ်အား ခါတော်မှီ ပစ်စလက်ခတ်သင်္ချိုင်းတစ်ခုသို့ ခေါ်ဆောင်သွားကာ လတ်ဆတ်နေဆဲ မြေစုမြေပုံများကို ပြသပါသည်။ ၎င်းမှာ စုပြုံမြှုပ်နှံမှုနေရာတည်း။ စကားပြန်မှတဆင့် သူက ပြောပြခဲ့သည်။ ထိုနေ့မတိုင်မီက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့သည် ထရပ်ကားကြီးတစ်စင်းဖြင့် ညပိုင်းတွင် ရောက်ရှိလာကြောင်း၊ မည်သည့် ရှင်းလင်းပြောကြားမှု မရှိဘဲ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှင့် ကလေးငယ်များပါဝင်သော ရုပ်အလောင်း ၅၈ ဦး ကားပေါ်မှ အောက်သို့ပစ်ချခဲ့ကြောင်း၊ ထိုရုပ်အလောင်းများက ဟိုတစ်စဒီတစ်စ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်ကာ မည်သူမည်ဝါမှန်း မမှတ်မိနိုင်တော့ကြောင်း၊ အခြားစခန်းတစ်ခုမှ လူများ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း၊ ထိုကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပဟေဠိဖြစ်နေရကြောင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက မည်သည့်ပြောဆိုဖြေကြားမှုမပြုသဖြင့် ဤအရေးကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် လူတိုင်းက ကြောက်ရွံ့ တုန်လှုပ်နေကြောင်း ဆိုပါသည်။ ၎င်းနောက် အလီက မြေပုံဟောင်းတစ်ခုထံသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး “ ကျွန်တော့်ဇနီးကို ဒီနေရာမှာ မြှုပ်နှံခဲ့တာပါ ” ဟု ပြောပြပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့မှာ အတန်ကြာမျှ မှင်သက်နေမိကြသည်။ ထို့နောက် မိုးရာသီကုန်ဆုံးလုအချိန် စိမ်းစိုနှူးညံ့သော စိုက်ကွင်းကျယ်ကြီးကို ဖြတ်လျှောက်လျက် သူ၏ဇာတ်လမ်းကို ကျွန်ုပ်အား အောက်ပါအတိုင်း ရိုးစင်းစွာ ပြောပြခဲ့ပေသည်။
“ ကျွန်တော်တို့ (စစ်တွေက လူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံး)ဟာ သင့်သင့်မြတ်မြတ် နေထိုင်လာကြတာပါ။ တစ်နေ့မှာတော့ သံဃာတွေက ဒါမင်းတို့မြေ မင်းတို့နိုင်ငံ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ကို ရွာကနေ အဓမ္မထွက်ခွာစေပါတယ်။ အိမ်နီးချင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ ရွာကနေ ခွာကိုခွာရတော့မယ်လို့ သိလိုက်ရပါတယ်။ မွတ်စ်လင်မ်ရပ်ကွက်တစ်ခုလုံးက ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖြစ်သွားကြတယ်။ အဲ့ဒီ ပရမ်းပတာရှုပ်ထွေးမှုကြားမှာ ကျွန်တော့်ဇနီး၊ သုံးနှစ်အရွယ်သားလေးနဲ့ ကွဲကွာသွားတယ်။ သူတို့ဟာ မြစ်တစ်ခုကို ဖြတ်ကျော်ကြရတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေစီးသန်လွန်းနေတယ်။ သူတို့ ရေနစ်ရတယ်လေ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဇနီးရဲ့အလောင်းကိုသာ ပြန်ရှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ် ”။
ညဖက်၌ ကျွန်ုပ် တည်းခိုသည့် ပင်လယ်ကမ်းခြေနားနေစခန်းဝယ် အတွေးပွားနေမိပါတော့သည်။ မြန်မာပြည်ကို ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များစခန်း တစ်ခုအဖြစ် အသွင်ပြောင်းရန် စွန့်ဦး လုပ်ငန်းရှင်များက မျှော်လင့်ထားကြပုံ၊ အလီနှင့်တစ်ကွ စခန်းထဲရှိအခြားသူများအကြောင်း၊ သူတို့သည် အသံဗလံများ မရောက်နိုင်သည့် ဝေးသီခေါင်ဖျား ဥပဒေမဲ့နေရာ တစ်ခုရှိ ဦးတည်ရာမဲ့ကြုံရာ ကျပန်းလူသားများသဖွယ်ဖြစ်နေကြောင်း၊ အများသွားလာနေသည့် မြေပြင်မှခွာ၍ ဝေးကွာသော အရပ်ဆီသို့ အသံတိုးညှင်းသထက် တိုးညှင်းကာ မျောပါသွားတော့သယောင် …… စသည်ဖြင့်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူအုပ်မှ မီးတင်ရှို့စဉ် အလွတ်ရုန်းထွက်ပြေးခဲ့သော နူးရ်အလီ။ ထိုစဉ်က ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရပ်ကြည့်နေခဲ့ပြီး၊ သူ၏ဇနီးနှင့် သုံးနှစ်အရွယ်သားလေးတို့မှာ အသက်ဘေးအတွက် မြစ်ချောင်းတစ်ခုကို ဖြတ်ကျော်ရင်း နစ်မြှုပ်ခဲ့ရသည်။
မျိုးနွယ်စုရှင်းလင်းရေးမှ လွတ်မြောက်ရန် ပင်လယ်ပြင်နှင့်မိတ်ဖွဲ့ခြင်း
ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုမှ ကိုက် ၁၀၀ ခန့်အကွာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်ဝတွင် ရိုဟင်ဂျာငါးဖမ်းလှေများကို ကျွန်ုပ် တွေ့ရ၏။ ယင်းလှေငယ် အုပ်စုများတွင် ရေမြုပ်နေပြီး ဆေးရောင် ကင်းမဲ့ခြောက်သွေ့သော သစ်သားလှေငယ်များ ၄၀ ခန့်ရှိသည်။ ရေမျက်နှာပြင်အထက်တွင် ပွနေသည့်ပျဉ်ခင်းများ အကြား အက်ကြောင်းများကို တွေ့နိုင်သည်။ စိမ့်ဝင်လာသည့်ရေများကို မနေမနားစုတ်ထုတ်နေသော အသံသဲ့သဲ့ကိုလည်း ကြားရပေမည်။ လှေငယ်များမှာ ပူးကပ်စီတန်းထားသော ပျဉ်ချပ်များသဖွယ်ဖြစ်လျက် ပင်လယ်သင်္ချိုင်းတစ်ခုအလား ခံစားရစေသည်။
ရေပြင်အနီး ရွှံ့ကမ်းပါးပေါ်တွင် ရိုဟင်ဂျာများစွာက လှေငယ်တစ်စင်းအား ပြန်လည်တည်ဆောက်နေကြ၏။ ပေ ၄၀ ခန့်ရှည်လျားသော သင်္ဘောကိုယ်ထည်မှာ အရိုးစုကြီးတစ်ခုအလား ထင်မြင်ရသည်။ အမျိုးသားတစ်ဦးက တူတစ်ချောင်းကို သံချေးတက်သံချောင်းများဖြင့် တူခေါင်းတပ်ဆင်နိုင်ရန် အလုပ်ရှုပ်လျက်ရှိသည်။ ဆားဓာတ်သည် သံထည်အားလုံးကို အလျင်အမြန် တိုက်စားနိုင်ရကား အနောက်တိုင်း သစ်ထွင်းလှေ တည်ဆောက်သူတို့သည် ကြေးနီနှင့် သံချေးမတက်နိုင်သော စတီးလ်ပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုကြကြောင်း ကျွန်ုပ် သတိရနေမိပေသည်။
နိုင်ငံ့လူဦးရေ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိ လူများစုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ မျိုးဖြုတ်ရှင်းလင်းရေးကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုဟင်ဂျာမွတ်စ်လင်မ် တစ်သိန်းလေးသောင်းကျော် အိုးအိမ်မဲ့ဘ၀ ရောက်နေရသည်။
“ ဒီလှေငယ်တွေထဲမှာ လူ ၆၀-၇၀ လောက်ကို တင်ဆောင်လေ့ရှိပါတယ် ” ဟု ကျွန်ုပ်၏လမ်းပြက ပြောပြသည်။ သူတို့သည် ၎င်းခနော်နီ ခနော်နဲ့လှေငယ်လေးများဖြင့် ရေကြောင်းအချက်ပြကိရိယာ တစိုးတစိမျှမပါဝင် ပင်လယ်ခရီးစဉ်သို့ ထွက်ကြကြောင်း၊ အချို့မှာ ကပ်လျက်ရှိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ လည်းကောင်း၊ အချို့မှာတော့ မလေးရှား နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလွတ်ရုန်းထွက်ပြေးကြသည်ဟူ၏။
လူ့အခွင့်အရေးအုပ်စုများ၏ အဆိုအရ ယမန်နှစ်အတွင်း သွေးပျက်နေရရှာသော ဒုက္ခသည်ထောင်ပေါင်းများစွာမှာ မျိုးဖြုတ်သုတ်သင်မှုမှ လွတ်မြောက်ရန် ပင်လယ်ပြင်၏ အန္တရာယ်များကို ရွေးချယ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။
၂၀၁၂ အတွင်း ရိုဟင်ဂျာအများစုပါဝင်သော လူပေါင်း တစ်သောင်းသုံးထောင်သည် ၎င်းနည်းလမ်းဖြင့် အလွတ်ရုန်းရာမှ (တရားဝင်စာရင်းရ) ၄၈၅ ဦးမှာ နစ်မြုပ်သေဆုံးရသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂမှ ဆိုသည်။ ယမန်နှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ကျွန်ုပ် ရန်ကုန်မှပြန်လာပြီး များမကြာမီ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးငယ်များ ပါဝင်သော လူပေါင်း ၇၀ သည် ၀န်နှင့်အားမမျှ၍ လှေပွင့်ထွက်ခြင်းကြောင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်း နစ်မြုပ်သွားရသည်ကို ကြားသိလိုက်ရပါ၏။ ချေးတက်သံချောင်းများကိုင်ဆောင်ခဲ့သူအမျိုးသားမှာ နိုင်ငံစွန့် ထွက်ခွာသောထိုသူတို့အထဲ ပါမပါဟူသည်ကိုမူ ကျွန်ုပ် မသိတော့ပါလေ။
ထောင်နှင့်ချီသောအိုးအိမ်များ၊ ကျောင်းများနှင့် ဗလီများမှာ လတ်တစ်လောအကြမ်းဖက်မှုအတွင်း မီးလောင်တိုက်သွင်းခံခဲ့ရသည်။ ဖော်ပြပါပုံမှာ စစ်တွေအနီးရှိ ပျက်စီးသွားသော ဗလီတစ်လုံးဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်အားအကျိုးဆောင်ပေးသူ အသက် ၆၀ အရွယ် ဦးအောင်ဝင်းနောက်မှ ကျွန်ုပ်သည် စစ်တွေအနီးရှိ မီးတင်ရှို့ခံဗလီ၏ပြာပုံများ အကြား ဖြတ်သန်း လိုက်ပါခဲ့သည်။ ကပ်လျက်နေရာရှိ စာသင်ဆောင်ဟောင်းနေရာသို့လည်း ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုသည်။ ထိုဗလီသို့ နေ့စဉ်လာရောက် ၀တ်ပြုသူမှာ ၃၅၀ ခန့်ရှိသည်ဟု ဦးအောင်ဝင်းက ပြောပြသည်။ အကြွင်းအကျန်အပိုင်းအစများဖြင့် ဖရိုဖရဲဖြစ်နေသော စာသင်ခန်း တစ်ခုကို ဖြတ်သန်းရာ ထောင်မတ်နေဆဲ နံရံများ၊ မဲတူးကျွမ်းလောင်ထားသော ကြမ်းပြင်၊ တစ်ချိန်က ကျောင်းသားများ အတွက် နေ့လည်စာပြင်ဆင် စီမံပေးရာ မီးဖိုဆောင် အပျက်အစီးပုံများ၊ လျှောက်လမ်းမြေပြင်ပေါ် ပြန့်ကျဲနေသည့် ပန်းကန်ခွက်ယောက်အကျိုးအပဲ့ အစိတ်အပိုင်းများ စသည်တို့ကို တွေ့ရလေ၏။
“ ဇွန်လ ၁၂ ရက်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ မဲမဲမြင်သမျှ မီးရှို့ခဲ့တယ်။ ၁၃ နဲ့ ၁၄ ရက်မှာလည်း ထပ်လုပ်ကြတယ်။ အဲ့ဒီအခါ ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့ သူတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ် ” ဟု သူက ဆိုသည်။
နံရံသာကျန်ရစ်သည့် နောက်ထပ်အခန်းတစ်ခုထဲ ကျွန်ုပ်တို့ ၀င်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအခိုက်အတန့်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀န်းကျင်မှအစောင့်များ၏ မျက်ကွယ်၌ ရှိခဲ့ကြ၏။ ဤတွင် ဦးအောင်ဝင်းမှ “ အကြမ်းဖက်မှုထဲမှာ ကျွန်တော့် ယောက်ဖနှစ်ဦးကို ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ တစ်ယောက်က ရိုက်နှက် သတ်ဖြတ်ခံရတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ (သူ့လည်ပင်းကို လက်ညှိုးဖြင့် ကန့်လန့်ဖြတ်ဆွဲပြကာ) ဓားရှည်တစ်ချောင်းနဲ့ လည်မျိုကို ခုတ်ပိုင်းခံရပါတယ်။ ကျွန်တော် သိပ်ဝမ်းနည်းပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ တရားမျှတမှု ခုချိန်ထိ မရှိသေးပါဘူးဗျာ ” ဟူ၍ တိုးညှင်းသောလေသံဖြင့် မျက်ရည်ဝဲလျက် ပြောပြပါသည်။
အစွန်းရောက် ဗမာဘုန်းကြီး အရှင် ၀ီရသူသည် မွတ်စ်လင်မ်တို့အား သတ်ဖြတ်ရန် လှုံဆော်မှုဖြင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ထောင်ဒဏ် ၂၅ နှစ် စီရင်ခံရ၏။ သို့သော် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည်
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဗုဒ္ဓ၀ါဒ နှင့် အမျိုးသားရေး အယူအဆတို့မှာ ရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာညောင်းသည် အထိ ဒွေးရောယှက်တင် ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ၁၉၂၀ နှစ်များက ဗြိတိသျှ ရဲအရာရှိအဖြစ် မြန်မာပြည်သို့ရောက်လာခဲ့သော ပထမဆုံး စာရေးဆရာ ဂျော့ဂ်ျ အော်ဝဲလ် George Orwell က ရဟန်းသံဃာတို့သည် ၀ိနည်းနှင့် မလျော်ညီစွာ ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြမှုများတွင် ပါဝင်သည်ကို မြင်တွေ့ ရကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ နှစ်တစ်ရာနီးပါး လွန်မြောက်သော် အစွန်းရောက်ဗမာဘုန်းတော်ကြီး အရှင်ဝီရသူမှာ မွတ်စ်လင်မ်ဆန့်ကျင်ရေး ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှု၏ အထင်ကရခေါင်းဆောင် အဖြစ် ပေါ်ထွက်လာပြီး အမုန်းတရားဟောပြောချက်များကြောင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှုတ်ချပြစ်တင်ခံရသူဖြစ်သည်။ သူသည် မွတ်စ်လင်မ် ၁၀ ဦးကို သတ်ဖြတ်အောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့မှုကြောင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ထောင်ဒဏ် ၂၅ နှစ်ချမှတ်ခံရသော်လည်း ၂၀၁၀ ခုနှစ်၌ အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လွတ်မြောက်လာသည်။ သူ၏ ဗလောင်းဗလဲရာဇ၀င်နှင့်ဆန့်ကျင်စွာ အရပ် ၅ ပေ ၇ လက္မသာရှိပြီး နှစ်လိုဖွယ် အသွင်ဖြင့် ကြည်ညိုစရာ ဓမ္မဆရာအသွင်ဆောင်၍ ၄၅ နှစ်ဆိုသောအရွယ်နှင့် မလိုက်အောင် နုပျိုနေခြင်းကို တွေ့မြင်ရသော အခါ ကျွန်ုပ်မှ မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ရလေ၏။
ရိုဟင်ဂျာတို့သည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ တရားမ၀င်ပြောင်းရွှေ့လာပြီး မြေယာနှင့်အလုပ်အကိုင် လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားသူများအဖြစ် ၉၆၉ အဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ကြသည်။ တစ်ဦးသောသူမှ ကျွန်ုပ်အား “ သူတို့ဟာ ခင်ဗျားတိုင်းပြည်က စိမ့်ဝင်လာတဲ့မက္ကဆီကန်တွေလိုမျိုးဘဲပေါ့ ” ဟု သံယောင်လိုက်ပြောဆိုပါသည်။
ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်များကို ရည်ညွှန်းသည်ဟုယူဆရသော ၉၆၉ ဂဏန်းကို ဦးဝီရသူမှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် စတင် ဆုပ်ကိုင်သည်။ ကျောက်တိုင်တစ်ခု အပေါ်ရှိသော ခြင်္သေ့သုံးကောင်မှ ရောင်ခြည်စက်ကွင်းဖြာထွက်နေသည့် ထိုအဖွဲ့၏လက်စွဲတံဆိပ်(လိုဂို)အား မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်း ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်များ၊ အငှားယာဉ်များ၊ ပုဂ္ဂလိက ယာဉ်များပေါ်တွင် အလွယ်တကူ တွေ့မြင်နိုင်ပါ၏။
ဦးဝီရသူထံ၌ ထောင်နှင့်ချီသော ဖေ့စ်ဘွတ်နောက်လိုက်များရှိနေသည်။ မွတ်စ်လင်မ်တို့ကို “ခွေးများ”၊ “ငါးဖယ်/ငါးကြင်းများ” နှင့် အခြား အမည်တို့ဖြင့် ကင်ပွန်းတပ်ခေါ်ဆိုထားသော သူ၏ YouTube ဗီဒီယိုများက အင်တာနက်တစ်ခွင်၌ ပျံ့နှံ့နေ၏။
မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း မန္တလေးမြို့၊ မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်တွင် ကျွန်ုပ် သူနှင့်ဆုံတွေ့ခဲ့သည်။ သူ့လက်အောက်တွင် သံဃာ ၂၅၀၀ ခန့်ရှိသည်။ ကမ္ဘာ့မွတ်စ်လင်မ်တို့၏ပူးပေါင်းကြံစည်ချက်ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာသံဃာများ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ၀ပ်လျှိုးနေရသည့်ပန်းချီကားကို သူက ရေးဆွဲခြယ်သပြသ ထား၏။ “သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က မြန်မာနိုင်ငံကို အစ္စလာမ်မစ် နယ်ပယ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ် ” ဟု ဦးဝီရသူက ဆိုသည်။ ရိုဟင်ဂျာအားလုံးနီးပါးမှာ အလ်ကိုင်ဒါကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်အုပ်စုတို့နှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိသော်လည်း အများစုမှာ ယင်းတို့၏သြဇာ လွှမ်းမိုးမှုအောက်၌ရောက်နေသည်ဟု သူက ပြောကြားသည်။
၀ီရသူ၏ ကျောင်းဝင်းပြင်ပတွင် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် သံဃာအလောင်းများ၏ မြင်မကောင်းလှသောဓာတ်ပုံများကို ဆိုင်းဘုတ်ကြီးနှစ်ခုဖြင့် စိုက်ထူထား၏။ ယင်းပုံများ၏အထက်၌ ငြိမ်းချမ်းရေးချိုးငှက်များ ၀ိုင်းရံထားသည့် ဦးဝီရသူ၏ပုံတူကို တခမ်းတနား ဖော်ပြထား၏။ ၎င်းသံဃာများသည် မွတ်စ်လင်မ်တိုက်ခိုက်ရေးသမားများ၏ မသေမချင်းသတ်ဖြတ်မှုခံရသူများဖြစ်ကြောင်း သူက ဆိုသည်။ ထိုပုံများကို မည်သည့်နေရာမှရရှိပါသနည်းဟု ကျွန်ုပ်မှမေးမြန်းသည့်အခါ ထိုင်းနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံများမှဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုနှစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ရိုဟင်ဂျာလူဦးရေ အနည်းအကျဉ်း ရှိနေကြောင်း၊ ဆက်လက်ပြီး နောက်ထပ်ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုမှ အလားတူဓာတ်ပုံများမှာမူ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရရှိလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သူက ပြောဆိုသည်။ သို့သော် ထိုဓာတ်ပုံများမှာ ခိုင်လုံမှု မရှိသလို ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မှုဟူ၍လည်း မရှိပါလေ။ အကြောင်းသော် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူများစုရှိနေသော လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း၊ သံဃာတော်များကို ကြည်ညိုလေးစားကြသော နေရာဒေသတစ်ခုအတွင်း ဤရွေ့ဤမျှများပြားလှသည့် သံဃာတော်များ သတ်ဖြတ်ခံရသည်ဆိုသည့် ဤအချက်မှာ ယုံကြည်လက်ခံရန် မဖြစ်နိုင်လွန်းလေပြီ။ ဤသို့သောတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခု၌ ဤရာဇ၀တ်မှုများ ကျူးလွန်ခဲ့သည်ရှိသော် သတင်းများတွင် အဘယ်ကြောင့် မဖော်ပြ မတင်ဆက်လေသနည်း ? အဆီအငေါ်မတည့်လွန်းလေစွ။
၀ါရှင်တန်ရှိ လူ့အခွင့်အရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ Physicians for Human Rights အတွက် အထက်တန်းဥပဒေအကြံပေးဖြစ်သူ အန်ဒရီးယား ဂစ်တဲလ်မဲန်း Andrea Gittleman က ဦးဝီရသူ ဟောကြားချက်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း မွတ်စ်လင်မ်ဆန့်ကျင်ရေးအကြမ်းဖက်မှုတို့အကြား အနီးကပ်ပတ်သက်မှုရှိနေကြောင်း သူမ၏ အဖွဲ့အစည်းမှ တွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဂစ်တဲလ်မဲန်းက ဤသို့ဥပမာတစ်ရပ်ကို လှစ်ဟပြသည်။ ရိုဟင်ဂျာတို့အား တတိယနိုင်ငံတစ်ခုသို့ ပို့ဆောင်ရေးဟူသော လက်ရှိသမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ အငြင်းပွားဖွယ်အစီအစဉ်ကို ထောက်ခံသောအားဖြင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ အတွင်း မန္တလေးမြို့၌ ၀ီရသူဦးဆောင်သော သံဃာတစ်စုမှ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ထောက်ခံ ခဲ့ကြသည်။ နောက်တစ်လကြာသော အခါ ရခိုင်ပြည်နယ်၌ အကြမ်းဖက်မှုသည် ပိုမိုဆိုးဝါးစွာ ဖြစ်ပွားလာတော့သည်။
(ရိုဟင်ဂျာအပေါင်းကို နယ်နှင်လိုက်ကြရန် သံဃာများမှ လှုံ့ဆော်ဟောကြားပြီး မရှေးမနှောင်းမှာပင် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီ စုပြုံသတ်ဖြတ်မှု ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း မြန်မာမီဒီယာများက အခိုင်အမာ တင်ပြထားကြသည်မှာ သတိပြုစရာဖြစ်၏)။
ယမန်နှစ်က အငြင်းပွားဖွယ်ရာ Times မဂ္ဂဇင်း၏အင်တာဗျူးတွင် ဦးဝီရသူအား “ဗမာဘင်လာဒင်” ဟူ၍ ခေါင်းစည်းတပ်ခဲ့သည်။ မဂ္ဂဇင်းထွက်ရှိလာပြီးနောက် သံဃာတစ်ထောင်ကျော်နှင့် ဗမာလူမျိုးတစ်စုက စီတန်းကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်သည်လည်း မုန်းတီးရေးစကားပြန့်နှံ့မှု ရပ်တန့်လိုက်ရန် လိုအပ်ချက်ကြောင့်ဟုဆိုကာ မဂ္ဂဇင်းကိုပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ထိုဆောင်းပါးတွင် မွတ်စ်လင်မ်တို့သည် ကမ္ဘာ့အကြမ်းဖက်မှု၏ ပင်မအကြောင်းတရားဖြစ်ကြောင်း၊ သူ့နောက်တော်ပါး ဒကာဒကာမများအနေနှင့် နိုးကြား သတိဝီရှိဖို့ နှိုးဆော်ထားကြောင်းဟူသော ဦးဝီရသူ၏ပြောဆိုချက်ကို ဖော်ပြထား၏။
“ အသင်တို့အနေနဲ့ မေတ္တာနဲ့ကြင်နာမှုကို အပြည့်အ၀ပေးနိုင်ပါမယ်။ ဒါပေမယ့်ခွေးရူးနဲ့တော့ တွဲအိပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ”။
ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာဗျူး ညနေခင်းပိုင်းတွင် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်အလောင်းကောင်ဓာတ်ပုံများအနီး ကျွန်ုပ်သည် ချွေးနစ်နေသည့် ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ရပ်လျက် ဦးဝီရသူ၏ ရင်ဖွင့်စကားများကို နားထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဖိလစ်ပိုင်ရှိ ကိုရာဇန် အကွီနို၊ ပါကစ္စတန်မှ ဘနာဇီရ် ဘူတို၊ အိန္ဒိယမှ မဟတ္တမ ဂန္ဒီ အစရှိသည့် သမိုင်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များကို လေးစားအားကျကြောင်း သူကဆိုသည်။
“ ငြိမ်းချမ်းစွာ ခုခံကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းကို ပြသခဲ့တဲ့ မာတင် လူသာကင်းလို ခေါင်းဆောင်မျိုးကို အထူးအားကျလေးစားမိပါတယ်။ သူ့စံနမူနာနောက်လိုက်တဲ့လူတွေ မြန်မာပြည်မှာ လက်တစ်ဆုပ်စာသာသာပဲ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကတစ်ယောက်ကတော့ ကျုပ်(ဦးဝီရသူ) ပါပဲ ”။
အစွန်းရောက်သံဃာဦးဝီရသူမှ သူ၏ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုများကို ထိုးပြရန် ကိုရင်ငယ်သုံးဦးအား စေခိုင်းသည်၌ စာရေးသူကိုယ်တိုင် စိတ်ဝင်တစားဖြစ်လာကြောင်း သတိပြုမိသည်
ကျွန်ုပ်မှာ တအံ့တသြဖြင့် အူယားလိုက်လေခြင်း။ အမေရိကန်ဧည့်သည်တစ်ဦးအဖြစ် အလိုက်သင့် ဆက်ဆံနေရသော ကျွန်ုပ်အဖို့ မွတ်စ်လင်မ်တို့အား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ညှင်းဆဲမှုဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အစီရင်ခံစာများနှင့် ရင်းနှီးပြီးဖြစ်ပါသည်။ (အားလုံးမဟုတ်သော်လည်း) ရိုဟင်ဂျာတို့အပေါ် အကြမ်းဖက်စုပြုံသတ်ဖြတ်မှု အများစုနောက်ကွယ်၌ ရှိနေသည်ဟု ညွှန်းခံရသည့် သေးညှက်ညှက် လူမွန်တစ်ဦးနှင့် စကားပြောဆိုနေသည်(ကို သူကိုယ်တိုင်မှသိပါ၏လော)။ သို့နှင့် ကျွန်ုပ်က “ အဲ့ဒီ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဘာကြောင့် အသတ်ခံရတာလဲ ? ဘာကြောင့်မို့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲမှာ သူတို့ဦးရေ တစ်သိန်းလေးသောင်းအထိ ရှိနေရတာလဲ ? ” ဟူ၍ သံသယကြီးစွာဖြင့် မေးမြန်းလေရာ ဦးဝီရသူမှ “ အဲ့ဒါဟာ လုပ်ကြံဝါဒဖြန့်ချက်ပါ ” ဟု သိမ်မွေ့စွာ ပြန်ဖြေလိုက်ပါတော့သည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရမှ ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင်ဥပဒေပြန်လည်ရေးဆွဲလိုက်သည့် အခါ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို ပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရသော တိုင်းရင်းရိုဟင်ဂျာများ
အမာနီအနောက်ဖက်တွင်တွေ့ရသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ထင်ရှားသောအတိုက်အခံခေါင်းဆောင် နှင့် နိုဗယ်လ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဓာတ်ပုံဖြစ်သည်။ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ၌ လူ့အခွင့်အရေးခေါင်းဆောင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြည်ညို ခံရသော ဒေါ်စုကြည်မှာ မြန်မာမွတ်စ်လင်မ်တို့ အပေါ် မျိုးနွယ်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နှုတ်ဆိတ်လျက် ရှိနေသည်။ (ဓာတ်ပုံ)
အမာနီ စိန်လှိုင်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နှင့်မွတ်စ်လင်မ်တို့အကြား ငြိမ်းချမ်းရေးတိုးမြှင့်ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေသည့်အုပ်စုဝင်များ အတက်မှဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမျိုးရေးပဋိပက္ခများကိုအသုံးချ၍ စစ်တပ်မှ အာဏာပြန်လည်ရယူလိုနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သူမက ပြောကြားသည်။
မန္တလေးရှိ သူမ၏ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သောဒုတိယတန်းစားအိမ်ငယ်လေးအတွင်း ပထမဆုံး သတိပြုမိစရာသည်ကား မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထင်ရှားသော အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် နှင့် နိုဗယ်လ် ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဓာတ်ပုံကားချပ်ကြီးဖြစ်၏။ ထိုအိမ်သည် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အမာနီ စိန်လှိုင်၏နေအိမ်ဖြစ်သည်။ သူမသည် ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ ခုနှစ်များက ကျောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလဆန္ဒပြမှုကြောင့် ထိန်းသိမ်းခံရသည်။ တစ်ခါ သူမ၏ ကောလိပ်ကျောင်းသူငယ်ချင်များ အဖမ်းခံရသည့်နောက် တစ်လတာ တောခိုခဲ့ဖူးသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ သမ္မတနေရာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် အမှန်တကယ် ရှိမရှိဟူသည်မှာ သံသယ၀င်စရာအဆင့်များစွာ ရှိနေကြောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြောင်းလဲပြုပြင်ရန် စစ်တပ်မှ လက်ခံရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ထိုဖွဲ့စည်းပုံ၌ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံသူ၏ မိသားစုသည် မြန်မာနိုင်ငံ တွင် မွေးဖွားသူများသာ ဖြစ်ရမည်ဟု ဖော်ပြထားကြောင်း၊ ဒေါ်စုကြည်၏ခင်ပွန်းနှင့်ရင်သွေးများမှာ အင်္ဂလန်တွင် မွေးဖွားသူများဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ရှိရာ ပြောင်းလဲပြုပြင်ပေးနိုင်ဖွယ်မရှိကြောင်း သူမက ပြောပြပါသည်။
“ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ကြိုဆိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုပေါ့။ ဒါပေမယ့် မွတ်စ်လင်မ်တွေအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ဖန်တီးနေတယ်။ ဒါဟာ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို လမ်းကြောင်းချော်သွားအောင်ဖန်တီးတဲ့ အစိုးရရဲ့ တမင်ကြံစည်ချက်ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ပါ။ အလျင်က လုံးလုံးမကြားဖူးတဲ့ မေတ္တာလှုပ်ရှားမှုတွေ အပူတပြင်း ခေါင်းထောင်လာပါတယ်။ အလားအလာကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်လို့ ထင်မြင်စရာရှိပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ပြဿနာတွေ ကနေ အာရုံလွှဲဖို့ အစိုးရပိုင်းက ကြိုးစားနေတာပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ မွတ်စ်လင်မ်တွေ တိုက်ခိုက်စရာ ဘာအကြောင်းမှ မရှိပါဘူး။ ကျွန်မတို့အားလုံး တစ်မြေတည်းမှာ မွေးဖွားလာကြတယ်။ ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ မောင်ရင်းနှမတွေလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်စုံတစ်ယောက်က နောက်ကွယ်ကနေ ကြိုးကိုင်နေတာဖြစ်တယ်။ ကြိုးဆွဲတဲ့ဇာတ်ဆရာ ရှိကိုရှိနေပါတယ် ”။
သနပ်ခါးလူးခြယ်ထားသော လုံမငယ်နှင့်အတူတွေ့ရသော စာရေးသူ ကီဗင် မက် ကီယာနန် Kevin McKiernan
ကျွန်ုပ် ရန်ကုန်မှာရှိနေစဉ် နောက်ဆုံးရက်များအတွင်း ဗုံးငါးလုံး ပေါက်ကွဲခဲ့၏။ ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုတွင် ၄၃ နှစ်အရွယ် ထရေးဒါးဟော်တယ်ရှိ အမေရိကန်ခရီးသွားဧည့်သည်တစ်ဦး ဒဏ်ရာအများအပြား ရရှိခဲ့သည်။ မြန်မာ စစ်တပ်ကို နှစ်ပေါင်း ၆၀ လုံးလုံး အာခံတိုက်ခိုက်နေခဲ့သော ကရင်သူပုန်များလက်ချက်ဟု အစိုးရက ပြစ်တင်စွပ်စွဲ၏။
သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်ကို စမ်းသပ်ဖွင့်လှစ်ပေးထားခြင်းကြောင့်လောမသိ – သတင်းစာတစ်စောင်က ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် အကြောက်တရားသွတ်သွင်းရန် အစိုးရ၏အားထုတ်မှုများဟုဆိုကာ ရဲထောက်လှမ်းရေးတို့ကို ပြစ်တ င်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ပြည်တွင်း အာဏာရှင်တို့၏ လမ်းကြောင်းများအရ ဤသုံးသပ်ချက်က အခြားအရာတို့ထက် ပိုမိုဆီလျော်လျက်ရှိနေပေသည်။
၎င်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ ၀ါတွင်းကာလအကုန် သီတင်းကျွတ်အားလပ်ရက်ကာလ မိုးရာသီကုန်လွန်စ အချိန်၌ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့၏ သားကောင် စွန့်လှူပွဲတော် – အီးဒုလ်အသ်ွဟာ နှင့် သီတင်းကျွတ်မှာ ထူးထူးခြားခြား တိုက်ဆိုင်နေသည်။ ထိုပွဲတော်နှစ်ခုလုံး၏ ရသကို ကျွန်ုပ် မြည်းစမ်းခွင့် ရခဲ့၏။ နှစ်စဉ်ကျင်းပသော သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်အတွင်း ကျွန်ုပ် လမ်းသလား လည်ပတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် ကျွန်ုပ်အား ကရင်းမ်မှ လာရောက်ခေါ်ဆောင်ကာ မွတ်စ်လင်မ်ရပ်ကွက်တစ်ခုသို့သွားသည်၊ ထိုနေရာတွင် ထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်း အသားလှူဒါန်းမှုကို တန်းစီလက်ခံရယူနေသည့် သူဆင်းရဲများအား တွေ့ရသည်။
ထောင် ၇ နှစ်ကျခဲ့သော ၁၉၉၀ လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်း ဦးကျော်မင်း(ညာဖက်မှ ဒုတိယ)ကို သူ့မိသားစုဝင်များနှင့် အတူ တွေ့ရစဉ်
ထို့နောက်တွင် ထင်ရှားသော ရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံရေးသမား ဦးကျော်မင်း၏နေအိမ်သို့ ကျွန်ုပ်တို့ သွားကြသည်။ ဦးကျော်မင်းသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ပါလီမန်လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည်။ သူ၏ ရိုဟင်ဂျာအရေး လှုပ်ရှားမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ပြည်ပ၌ အမည်ဆိုးတွင်ရသည်ဟုဆိုကာ ထောက်လှမ်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သူ့အား ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ၎င်းနောက်ဆက်လက်၍ သူ၏မိသားစုဖြစ်သော သူ့ဇနီးနှင့်ရင်သွေးသုံးဦးကိုပါ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သူနှင့်အတူ ခေါ်ယူထိန်းသိမ်းခဲ့လေသည်။ ထိုစဉ်က အသက် ၁၈ နှစ်သာရှိသေးသည့် အငယ်ဆုံး သမီးဖြစ်သူ ဝေေ၀မှ ကျွန်ုပ်အား ပြောပြသည်မှာ – ညဉ့်သန်းခေါင်ချိန်တွင် အမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားလှသည့် အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနမှ ၎င်းတို့နေအိမ်သို့ ရောက်လာကြောင်း၊ မည်သည့်ချေပရှင်းလင်းခွင့်မပြုဘဲ အကျဉ်းထောင်ထဲ၌ နှစ်လတာထားရှိပြီးနောက် သူမမိခင်နှင့် သူမ၏သွေးချင်းများ အားလုံးကို ထောင်ဒဏ် ၁၇ နှစ်ချမှတ်လိုက်ကြောင်း၊ အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်သော သူမ၏ဖခင်မှာ ၄၆ နှစ်ထောင်ဒဏ် စီရင်ချက်ချခံရကြောင်း၊ နာမည်ကြီး အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်၌ သူတို့အားလုံးကို ချုပ်နှောင်ထားခဲ့ကြောင်း စသဖြင့်ဖြစ်ပါ၏။ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ကို ၁၈၇၁ ခုနှစ် ဗြိတိသျှခေတ်တွင် အကျဉ်းသား ငါးထောင်အတွက် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၊ ထိုခေတ်က ဗြိတိသျှအင်ပါယာ၌ အကြီးမားဆုံးထောင် တစ်ခုဖြစ်သည်။ မြန်မာစစ်အစိုးရ လက်ထက်တွင် လူဦးရေ တစ်သောင်းအထိ မဆန့်မပြဲ ထည့်သွင်းခဲ့သည်ဟု ဦးကျော်မင်းက ဆိုသည်။
ကျွန်ုပ်၏ခရီးစဉ်မတိုင်မီ လအနည်းငယ်ခန့်ကမှ ဦးကျော်မင်းမိသားစုတို့မှာ အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်လာခဲ့ပါသည်။ သံတိုင်များနောက်ကွယ်မှ သူတို့၏ နာကြင်ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်က ကျွန်ုပ်အား စိတ်ထိခိုက်စေခဲ့ပါသည်။ (ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်အတွက်လည်း) ပီတိဖြစ်ရပါသည်။
ဦးကျော်မင်းသည် လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်ခဲ့သည်။ ၂၅ နှစ်အရွယ် ထက်မြက်သော သမီးဖြစ်သူမှာလည်း ထောင်တွင်း၌ အင်္ဂလိပ်စာပေကို အားစိုက်လေ့လာခဲ့ရာ ယခုအချိန်တွင် အတော်အတန် ကျွမ်းကျင်နေလေပြီ။ အမေရိကန်သံရုံး၌ လူထုရေးရာ သင်တန်းများ တက်ရောက်သည်။ သူမနှင့်သူမ၏ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှာ အမေရိကန် ခရီးစဉ်သို့ ဖိတ်ကြားခံရကာ မကြာသေးမီကပင် နယူးယော့ခ်နှင့်ဝါရှင်တန် ခရီးစဉ်မှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါသည်။ ၎င်းမှာ အသေးအဖွဲ အစီအစဉ်ဖြစ်သော်လည်း အလားအလာကောင်းသော လက္ခဏာဆောင်ခဲ့ပါသည်။
တရုတ်လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် အိမ်ပြန်ခရီးစဉ်ဝယ် မန်ဒရင်တရုတ်စာတန်းထိုး The Lone Ranger ကို ကြည့်ရှုရင်း၊ စားကောင်းသောက်ဖွယ်များကို စားသုံးရင်း ကမ္ဘာကြီး မည်မျှကျဉ်းမြောင်းသွားသည်ကို လည်းကောင်း၊ မြန်မာပြည်သည် အဘယ်မျှ ခေတ်နောက်ကျ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်း ကျွန်ုပ်မှ သြချသုံးသပ်နေမိပေသည်။
စန်တာဘာဘရာသို့ ကျွန်ုပ်ပြန်ရောက်ပြီး ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာ အပယ်ခံ ရိုဟင်ဂျာတို့အား နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရန် ကုလသမဂ္ဂက မြန်မာနိုင်ငံသို့ တိုက်တွန်း စာထုတ်ပြန်သည်။ ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့် ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပြီး ၀င်မစွက်ဖက်ပါရန် မြန်မာနိုင်ငံမှ မတုန့်မဆိုင်း တုန့်ပြန်လိုက်လေသည်။ ထို့နောက်တွင် ရိုဟင်ဂျာတို့အပေါ် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအဆုံးသတ်ရန်၊ လူမျိုးရေးနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ လူနည်းစုဝင်များအတွက် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု လူ့အခွင့်အရေးများကို လေးစားကျင့်သုံးရန် မြန်မာနိုင်ငံအား တွန်းအားပေးရေးအဆိုတစ်ရပ်ကို အမေရိကန် ကွန်ကရက်၌ တင်သွင်းသည်။ မိန်းပြည်နယ်မှ အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်း တွမ် အင်ဒရူးစ်မှ မူကြမ်းဆွဲပေးထားသော ယင်းအဆိုမှာ အကျယ်တ၀င့် သုံးသပ်တင်ပြချက်များ ပါဝင်သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၂၅ နှစ်က ဆန္ဒပြသူများကို သွေးချောင်းစီးဖြိုခွင်း လိုက်ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံအား စစ်ရေး အကူအညီဖြတ်တောက်လိုက်ခြင်း ဟူသော နောက်ဆုံးအကြီးစားပိတ်ဆို့မှုကို ဖယ်ရှားမည့် အိုဘားမားအစိုးရ၏နောက်ကွယ်မှမြင်ကွင်းများ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ၎င်းက ဦးတည်တင်ပြထား၏။ “ လက်နက်အကြောင်း ဆွေးနွေးတာကိုက မှားယွင်းပါတယ်။ မြန်မာစစ်တပ်ဟာ အစိုးရလက်အောက်ခံလား၊ အစိုးရဟာ စစ်တပ်ရဲ့လက်အောက်ခံ အဖြစ်ရှိနေဆဲလား ဆိုတဲ့ အချက်ဟာ အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အမေရိကန်ရဲ့စစ်ရေး အကူအညီပေးလိုက်မှာကို ကျွန်တော် စိုးရိမ်နေရတာပါ ” ဟု သူက ကျွန်ုပ်အား ပြောပါသည်။
၀ါရှင်တန်ဒီစီမှ အကြည်ညိုခံပုဂ္ဂိုလ်တဖြစ်လဲ မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေးပြယုဂ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ရိုဟင်ဂျာတို့ အပေါ် လူမဆန်စွာ မျိုးဖြုတ်သုတ်သင်မှု မျက်နှာစာ၌ အဘယ်ကြောင့် နှုတ်ဆိတ်နေရကြောင်း အင်ဒရူးစ်ကို ကျွန်ုပ်မေးမြန်းပါသည်။
“ မွတ်စ်လင်မ်တွေဟာ တတိယမြောက် နိုင်ငံရေး အကာအရံ ဖြစ်နေလို့ပါဘဲ။ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်နိုင်ငံရေးသမား ကမှ လူနည်းစုဝင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြင်းထန်ပြတ်သားစွာ မရပ်တည်နိုင်ကြဘူးလေ ” ဟူ၍ သူက ခပ်ဘွင်းဘွင်းပင် ပြောချလိုက်ပါတော့သည်။
** ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လ ၆ ရက်ထုတ် The Independent မဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးတွင် Burma’s Brutal Buddhists စာတန်းဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သော Kevin McKiernan ၏ Buddhist Rampage in Burma ဆောင်းပါးကို မြင့်မိုရ်မောင်မောင်မှ အရှိအတိုင်း ပြန်ဆိုရေးသားသည်။
ကီဗင် မက်ကီယာနန် သည် ဂျာနယ်လစ်တစ်ဦး၊ ၎င်းအပြင် ရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်၏။ Good Kurds, Bad Kurds ဟူသော မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ The Kurds: A People in Search of Their Homeland (St. Martin’s Press, 2006) စာအုပ်ကို ပြုစုရေးသားသူလည်းဖြစ်သည်